अहिलेको चर्चित नाम ‘बतास’ सँगको अन्र्तवार्ता | दर्पण दैनिक
अहिलेको चर्चित नाम ‘बतास’ सँगको अन्र्तवार्ता
प्रकाशित मिति: २०७८ पुष २६ गते ०९:३५
नारायणहिटी दरवार संग्रालयदेखि पशुपति धर्मशालासम्मको सेटिङबारे के हो वास्तविकता ?
जनप्रतिनिधिले बढाईचढाई कुरा गर्ने गर्छन् : हिक्मतबहादुर बस्नेत
२०७८ पुष २८ गते ०४:०७
देश संघीयतामा गएसँगै अहिले नेपालमा तीनतहको सरकार छ । जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार भनेको वडा तह हो । सबैभन्दा नजिकको सरकारले आफ्ना जनतालाई कतिको सेवा सुविधा दिन सकेका छन त ? स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछिको यो अवधिमा विकास निर्माणका काम के कति भए ? शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेतसँग दर्पण दैनिकका केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा संघीयता नबुझ्नेको तर्क हो
२०७८ मंसिर २२ गते ०९:२१
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि चार वर्ष पूरा भैसकेको छ । यो समय अवधिमा कति जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरे भने कतिपयले भने यो वा त्यो बहानामा प्रतिबद्धता तोड्दै गए । विकास निर्माणका कार्यहरू त परै जाओस् समाजका अत्यावश्यक काम पनि गर्न बिर्से । कतिपय जनप्रतिनिधि त पैसा पावर र पहुँचको आडमा भ्रष्टाचार गर्न पनि लिप्त भए । अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि समाप्त हुन केही महिनामात्रै बाँकी छ । यो समयावधिमा स्थानीय चुनावताका गरेको घोषणा र प्रतिबद्धता कल्ले कति पूरा गरे भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष मुल्यांकन तथा लेखाजोखा गरिरहेका छन र गर्ने नै छन । केही जनप्रतिनिधिले भने स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका नगरप्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पासँग दर्पण दैनिकका केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: